In Ka Badan 40 Boqolkiiba Dadka Adduunka Waa La Karantiilaa | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — March 30, 2020
Sawir tusaale ah oo muujinaayo karantiilka.
In ka badan 3.38 bilyan oo qof oo adduunka oo dhan ayaa laga codsaday ama lagu amray inay raacaan nooca xadidan oo ah xakameynta cudurka korona fayrus. Taasi waxay ka dhigaan tahay ilaa 43 boqolkiiba wadarta guud ee bulshada adduunka, taasoo ah 7.79 bilyan oo qof, marka loo fiiriyo tirakoobka Qaramada Midoobay.
Gobolka Shiinaha ee Hubei iyo caasimada Wuhan, oo ah xuddunta ugu horeysa ee cudurka ‘coronavirus’, waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee soo roga xayiraad adag dabayaaqadii bishii janaayo si loo xaddido faafitaanka covid-19.
In kasta oo Hubei dib loo furay ka dib bilo go’doomin ah, xayiraadaha ayaa ku soo kordhayey adduunka oo dhan toddobaadyadii la soo dhaafay.
Qiyaastii Maarso 18, in ka badan 500 milyan oo qof ayaa galay xannibaadaha. Tani waxay kor u kacday in ka badan 1 bilyan oo qof markay ahayd Maarso 23, iyo laba maalmood ka dib waxay ka badnaatay tahay 2 bilyan. Bishii Maarso 25, in ka badan 3 bilyan oo qof ayuu saameeyey cudurka.
Guud ahaan dunida oo idil
Inka badan 3.38 bilyan oo dad ah, ugu yaraan 78 dal ayaa lagu dhiirigaliyay inay guryahooda joogaan.
Intooda badan, ugu yaraan 2.48 bilyan oo qof oo ku nool 42 dal iyo dhulal, ayaa ku sugan go’doomin khasab ah.
Ma jiro gobol ka mid ah adduunka oo laga tegey.
Yurub dhexdeeda, wadamada badankood waxay soo saareen xeerar karantiil ah. Aasiya, Hindiya, Nepal, Sri Lanka iyo inbadan ayaa saameeysay. Waxaa lamid ah wadamada Bariga Dhexe, sida Ciraaq, Jordan, Lubnaan iyo Sacuudi Carabiya.
Afrikada dhexdeeda, xayiraad ayaa laga soo saaray dalal ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Morocco, Madagascar, Rwanda iyo Soomaaliya, inkastoo hadana maalmo la furay duulista hawada Soomaaliya.
Ameerika dhexdeeda, isla sidaas ayaa looga sameeyay waddamada sida Kolombiya, Arbeeriya iyo Peru, marka lagu daro Maraykanka badankood. Australia iyo New Zealand labaduba waxay soo saareen xiritaan.
Bandow iyo karantiil
Inta badan waddammada, dadku waxaa loo oggol yahay inay ka baxaan guryahooda si ay u shaqo tagaan, u iibsadaan alaabaha muhiimka ah ama ay u helaan daaweyn caafimaad.
Ugu yaraan sagaal dal, oo ka kooban qiyaastii 511 milyan oo qof, ayaa ku booriyay dadweynaha inay guryahooda joogaan, iyada oo aan la ciqaabin.
Ugu yaraan 21 dal, qiyaastii 384 milyan oo qof, ayaa soo rogay bandow fiidkii in aan la socon karin.
Iyo ugu yaraan toddobo dal ayaa karantiilay magaalooyinkooda ugu muhiimsan, kana horjoogsanaya dadweynaha inay soo galaan ama ka baxaan. Waa caasimada Kongo Kinshasa, caasimada Riyad, Makka iyo Madiina ee Sacuudi Carabiya, Helsinki, Finland iyo Baku oo ku taal Azerbaijan.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO waxay sheegtay in farxalashada iyo nadaafadda oo la ilaaliyo ay aasaas iyo gundhig u tahay ka hortagga fayraska. “Dalal badan oo Aasiya ku yaalla waxay arrintaas ka barteen dhibaatadii xanuunkii SARS ee 2003-dii. Dalalkaas waxay ogaadeen in nadaafadda ay ka hor tagto in dadka ay xanuunsadaan ama qaadaan fayras,” ayuu sheegay Nyenswah. Dalalka sida Singapore, Hong Kong, iyo Taiwan waxaa laga helaa xarumo jidadka ah oo la dhigay dawada disha bakteeriyada, iyo isticmaal joogto ah ee waxyaabaha sanka iyo afkalagu xirto.
Tags: In Ka Badan 40 Boqolkiiba Dadka Adduunka Waa La Karantiilay
Next post Dhibaatooyinka ay Leedahay Daymaha ay Qaataan Dowladaha
Previous post Wax Ka Baro Cudurkaan Dunida Saamaynta Ba'an Ka Gaystay ee Korona Fayrus *COVID-19